Waa arrin ku xiran rabitaanka iyo baahida labadiinaba adiga iyo ilmaha sidaa awgeed way fiican tahay in aad ilmaha naaska ku nuujiso siyaabo kala duwan. Hababka naas-nuujinta caadiga ahi waa: fadhiga, qofka oo kadalooba/nus-fadhi (meel ku tuursan) ama jiifa, waa muhiim inuu qofku dareemayo dabacsanaan. Tijaabi sida adiga kugu haboon si aad u oggaato sida kuugu fiican adiga iyo ilmahaagaba.
Fariiso fadlan adiga oo istoosinaya
Si dabacsan ugu fariiso kursi/korsiga fadhiga yaal ee yar/kursiga dheer ee fadhiga oo leh wax dhabarka kaa soo taageeraya, waa in aanu sare u qaadnayn oo aad cagaha dhulka dhigikartid
Haddii aad caawimo dheeraada ugu baahato dhabarka: markaa kushimo dhabarka iska dhig si aad toos ugu fariisato.
Naas-nuujinta meel ku tiirsanaanta
Naas-nuujinta fadhiga nuska (naas-nuujinta meel ku tiirsanaanta)
Habkan naas-nuujinta ayaa noqonkara marka hore mid faa'iido leh, maxaa yeelay si fiican ayuu ilmuhu jirkaagu ugu soo dhowaanayaa. Haddii aad u jiiftaan maqaar ilaa maqaar waxa markaa sii badanaya dabeecadihii kicinta naas-nuujinta
Haddii aad dib u fadhido waxaad madaxa ilmaha dhigikartaa labadaada naasood dhexdood ama hal naas
U daa ilmuhu isagu ha raadiyo naaska
Faa'iidada ay leedahay tani waa waxaad isticmaalaysaa sharciga culayska maxaa yeelay ilmuhu aad ayuu adiga kuugu dhow yahay markaa uma baahnid in aad ilmaha wax badan xakamayso
Haddii ay naasuhu u dhacaan dhinacyada waxaad u baahan tahay in aad naasaha caawiso si ay toos u noqdaan/hore si uu ilmuhu si fudud ugu qabsankaro
Waa inay hawadu ilmaha u furan tahay/neefsankaro
Dhig hal ama laba barkimo madaxa hoostiisa
U jiifso dhinaca aad ilmaha naaska u siinayso
Soo riix gacanta dhinaca aad naaska ka nuujinayso waxyar, si uu udhismo "godyar" oo u dhexeeya gacanta iyo jirka
Dib u celi caloosha iyo dabadaada si uu ilmuhu boos u leho adiguna aad si fiican ugu jiifsato
Hubso inuu ilmaha jirkiisu jiifo oo uu adiga kugu soo jeedo ibta naaskuna ku aadan tahay sanka ilmaha si uu afka aad u kala qaado oo uu u qabsado. Madaxa ilmuhu waa inuu jiifo, ee aanu ku jiifin gacanta hooyada
Si uu ilmuhu aad kuugu soo dhowaado waxaad isku daydaa in aad ilmaha dhigto gacanta iyo naaskaaga hoostiisa
Granskare: Kajsa Bohlin Blennow , Sektionschef Huddinge